Dawlada Kenya oo Qiratay in aanay Awood u lahay ka Hortaga Weerarada Al-shabab ku soo qaado dalkeeda. |
Dawlada Kenya oo Qiratay in aanay Awood u lahay ka Hortaga Weerarada Al-shabab ku soo qaado dalkeeda.
Hargeysa (GNN) – Dawlada Kenya ayaa qiratay in Ciidamadeedu aysan u Babac dhigi karin kuwa Kooxda Alshabaab ee duulaanka joogtada ah ka geysta gudaha iyo daafaha Kenya.
Joseph Nkaisery oo ah Wasiirka arimaha Gudaha iyo Amniga dalka Kenya ayaa markii ugu horaysay Hortagay Guddi hoosadka Barlamaanka Kiniya oo loo xil saaray inay baadhaan xaqiiqda weerarkii Gaarisa iyo qaabkii ay dawladu ugu Gurmatay.
Joseph Nkaisery wuxuu sheegay in weerarka markii uu dhacay goobta loo diray unug si khaas ah utababaran oo ka tirsan ciidanka KDF si ay Jaamacada gudaha ugu galaan hase ahaatee way ku dhiiran waayen ayuu yiri wasiirku.
‘‘Laba dabley ah oo ka tirsan kooxdii weerarka gaysatay oo ku hubaysnayd qoriga loo yaqaano BKM ayaa labada iridood ee jaamacada qori la istaagtay waxayna ku guulaysteen inay caabiyaan unugii khaaska ahaa ee ciidanka KDF, Askari u dhawaada ayaa la waayey.”Ayuu yidhi
Wasiirku wuxuu sheegay in 12 saac kadib weerarkii la soo afjaray kadib markii ciidamo khaas ah oo ka tirsan koofiyada Casta qaybta Recce oo laga diray Nairobi ay goobta gaadheen.
Dhanka kale wasiirku wuxuu xusay inay jirtay xog sheegaysa in weerar ku soo fool leeyahay jaamacada balse saraakiisha amniga ee Gaarisa county ay dayaceen.
Wuxuu qiray in khaladka dhacay uu masuul ka ahaa madaxa amniga ee Gaarisa Njenga Miiri.
Masuulkan ayaa la sheegay inuu ahaa gudoomiyihii Lamu county markii uu dhacayay weerarki mpeketoni markaas kadibna loo soo badalay Gaarisa.
Masuulkan ayaa hada ka mid ah 6 masuul oo weerarkii Gaarisa kadib shaqada laga joojiyay.